Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်း လွှတ်တင်
ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီက PW4000 အင်ဂျင် မတော်တဆ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် 777 လေယာဉ်များ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထား
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သေနတ်အရောင်းဆိုင်တစ်ခု၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ ၃ ဦးသေ ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
တရုတ်	မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး	ဂြိုဟ်တု
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Tiantong 1-03 မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က လွှတ်တင်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Science & Technology
ရှီးချန်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က အောင်မြင်စွာလွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Tiantong 1-03 ဂြိုဟ်တုအား ပေကျင်းစံတော် နံနက် ၀၀:၂၅ နာရီက Long March-3B သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စီစဉ်ထားသော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသို့ အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Tiantong 1-03 မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က လွှတ်တင်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Tiantong-1 သည် တရုတ်နိုင်ငံက သီးခြားတီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ တည်ဆောက်ထားသော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုစနစ် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စနစ်တွင် အာကာသအပိုင်း၊ မြေပြင်အပိုင်းနှင့် သုံးစွဲသူဝင်ရောက်ရာနေရာတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသနည်းပညာအကယ်ဒမီက တီထွင်ထားသော Tiantong 1-03 ဂြိုဟ်တုသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အနီးဝန်းကျင်ဧရိယာများ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့် အခြားဆက်စပ်သောဒေသများနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိ ပင်လယ်ပြင်ဧရိယာအတော်များများမှ အသုံးပြုသူများအတွက် အသံ၊ စာတိုနှင့် အချက်အလက် စသဖြင့် ရာသီမရွေး၊ အချိန်မရွေး တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် မြေပြင်အဆောက်အအုံများနှင့် မိုဘိုင်းကွန်ရက်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က လွှတ်တင်မှုသည် Long March ဒုံးပျံစီးရီး၏ ၃၅၈ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အာကာသလွှတ်တင်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-20 01:28:15|Editor: huaxia
XICHANG, Jan. 20 (Xinhua) -- China successfully launchedanew mobile telecommunication satellite from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China's Sichuan Province on Wednesday.
The Tiantong 1-03 satellite was launched at 00:25 a.m. (Beijing Time) byaLong March-3B carrier rocket and entered the planned orbit successfully.
Developed by the China Academy of Space Technology, the Tiantong 1-03 satellite will establishamobile network with ground facilities to provide all-weather, all-time, stable and reliable mobile communication services such as voice, short message and data for users in China and its surrounding areas, the Middle East, Africa and other related regions, as well as most sea areas in the Pacific Ocean and Indian Ocean.
Wednesday's launch was the 358th by the Long March rocket series and also the country's first space launch in 2021. Enditem
1- 3- A Long March-3B carrier rocket carrying the Tiantong 1-03 satellite blasts off from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China's Sichuan Province, Jan. 20, 2021. China successfully launchedanew mobile telecommunication satellite from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China's Sichuan Province on Wednesday. The Tiantong 1-03 satellite was launched at 00:25 a.m. (Beijing Time) byaLong March-3B carrier rocket and entered the planned orbit successfully. (Photo by Guo Wenbin/Xinhua)
Previous Article မိုးမျှော် မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်းတံတားအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ
Next Article တရုတ်နိုင်ငံက WJ-700 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ပွဲဦးထွက်ပျံသန်း
နာမည်ကျော်ကားကုမ္ပဏီ“Tesla”၏ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Model Y ကားအမျိုးအစား စတင် ဖြန့်ချိပြီဖြစ်